Shirkada Diyaaradaha ee Virgin Airline oo Lacag aruurinaysa - Alietc.com
Samiira Hassanzadeh March 14, 2021 0 comments
Waxaa burburiyey aafada, Virgin Atlantic Airways waxay qorsheyneysaa inay uruuriso million 160 milyan, sida uu sheegay afhayeen u hadlay shirkadda diyaaradaha ee Richard Branson.
Hawo-mareenku wuxuu sii wadaa inuu sare u qaado xaaladdiisa maaliyadeed, ayay tiri, iyada oo ku dartay maalgelinta ugu dambeysay (million 160 milyan) waa taageero wanaagsan sanadka 2021 maadaama soo kabashada ay wali tahay mid gaabis ah. Iib-iibinta laba Boeing 787s bishii Janaayo ayaa shirkadda ka caawisay.
Sky News ayaa soo warisay in kooxda Branson ee Virgin Group ay bixin doonto ku dhowaad 100 milyan oo euro isla markaana 60 milyan oo ginni ah gadaal laga bixin doono.
Bishii Nofeembar ee la soo dhaafay, Virgin ayaa ku dhawaaqday rescue 1.2 bilyan oo heshiis badbaadin ah oo damaanad qaaday badbaadada shirkadda in kasta oo xaalad aan fiicnayn ay sabab u tahay Covid-19.
Sannadkii 2020, shirkaddu waxay go'aansatay inay yareyso kharashka ku kacaya 335 4,650 milyan, ayuu yiri Maamulaha Shai Weiss / Exec Dir oo ka tirsan shirkadda Virgin Atlantic Airways. Sannadka sidoo kale waxaa la arkay XNUMX shaqo lumis iyo yareynta maraakiibta.
#Waqooyiga Atlantic Airways